Voice Of Somalia | Voice Of Somalia
Tag Archives: Voice Of Somalia
WAREYSI-Tarsan Oo Muujiyay In Dalku Gumeysi Ku Jiro.
Posted on March 18, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Tarsan ayaa sheegay in dowladdu ku fashilantay federalka sababo la xiriira isagoo qabyaaladeysan oo sabab u noqday kala qeybsanaan iyo is nacayb bulshada dhexdeeda ah.
Waxa intaa dheer oo uu tarsan sheegay in Federalku uu yahay qorshe ay shisheeyuhu wataan oo dowladda Xassan Sheekh sanka laga galinayo ama lagu dirqinayo, wuxuu tusaale usoo qaatay wixii dhacay markii ay dowladdu diiday maamulka Axmad Madoobe xilligaasoo uu sheegay in Xabashitu dowladda ku amartay iney aqbalaan maamulkaasi.
Isagoo ka jawaabayay su’aal la weydiiyay oo ahayd: N/key waxa uu isaga kala gooshaa gobolada dalka iyadoo la og yahay in maalin maalmaha kamid ah uu Subaxeedii ka quraacday Muqdisho, duhurkeedii ka qadeeyay Garowe, habeenkeediina ka casheeyay Hargeysa, Xassan Sheekhna sidaas oo kale uma tagi karo gobolada wadanka ee maxaa dhacay? ayuu ku jawaabay in taasi muujineyso cuqdada la kala dhex dhigay Soomaalida, isagoo dhaliilay Xassan Sheekh.
Sidoo kale marka la eego sida ay dowladda awaamiirta uga qaadato shisheeyaha ayuu Tarsan ku tilmaamay dullinimo ay sabab u yihiin madaxda dowladda “Haddaad daciif iska dhigtid oo aad weydiiso sidaas musqusha u tagi lahayd, fageytada saad u qabsan lahayd, meesha aad cuntada ka cuni lahayd waa nasiib darro” ayuu yiri Tarsan isagoo madaxda dowladda u sheegay ineysan macquul ahayn iney ummad hogaamiyaan marba haddii iyaga la hogaamiyo.
Duqii hore ee Muqdisho ayaa waxa uu soo hadal qaaday dhibaatooyinka lagu hayo shacabka magaalada Muqdisho oo ay kamid tahay wadooyinka u xiran dowladda iyo ciidamada shisheeye, wuxuu sheegay inaan dhagxaan lagu sugi karin ammaan loona baahan yahay in dhibka laga dul qaado shacabka gobolka Banaadir.
Tarsan wuxuu kusoo caan baxay bannaan baxyadii looga soo hor jeeday duullaankii Xabashida ee Muqdisho, waxaana la weydiiyay su’aal ku saabsan waxa iska badalay mowqifkii wadaniyeed ee uu ku muujin jiray sida aanu u ogoleyn in ciidamada Xabashidu joogaan ciida Soomaaliya.
Dhawaan ayey ahayd markii hogaamiye kooxeed Barre Hiiraale uu shaaca ka qaaday in dalku gumeysi ku jiro isaguna uu maxbuus ku yahay magaalada Muqdisho.
Halkan Ka Dhageyso Wareysiga Tarsan
SIDEE SHACABKA SOOMAALIYEED UGU HOOS NOOLAAN DOONAAN MAAMUL GOBOLEEDYO AY CIIDAMADOODU AJAANIIB YIHIIN?
Posted on March 17, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Inta badan maamul goboleedyada Federaalka waa dhisay dalal shisheeye ah oo ay Itoobiya ugu horeyso waxaana ilaaliya oo ciidamo u ah ciidamada AMISOM iyo kuwa Itoobiya oo aan run ahaantii kamid ahayn kuwa AMISOM markii laga reebo inay magacaas mushaar saanad milateri ku qaataan.
Talada maamuladaasna waxaa gacanta ku haayo ururka IGAD oo ah isla kuwa ay ciidamadoodu dalka haystaan hadda.
Sidaas daraadeed madaxda maamuladu waa kuwo u hogaansan talada dalalka IGAD islamarkaana ku hoos nool ciidamada Amisom, waxaana halkaas ka muuqanaysa inaysan ahayn dad u madax banaan hogaaminta dalkooda.
Haddaba waxaa su,aal ah sidee shacabka Soomaaliyeed ugu hoos noolaan karaan maamul ku fac ah inta ay ciidamada shisheeye dalka joogaan oo ku shaqeynaya fikrado shisheeye?
Mise xaalku waaba sikaloo ciidamada shissheeye ayaanba meelna uga socon oo ku nagaan raba arligeena inta ay madaxda goboladu yihiin kuwo ubaahan oo aan jiri karin la,aantood?
QORE: Talowadaagta Qaranka.
DHAGEYSO:-Kenya”Shabaab Wada Hadal ayaan Diyaar ula Nahay,Weerarada Ha Naga Joojiyaan”
Posted on March 15, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Aadan Barre Ducaale oo ah xubin ka tirsan Baarlamanka Kenya ayaa ka hadlay weerarkii uu ka badbaaday Gudoomiyaha Mandheere oo mas’uuliyadiisu ay sheegteen shabaabul Mujaahidiin.
isagoo umuuqday mid aanan ka war heynin qadiyada shabaabku udagaalamayaan ayuu ka codsaday inay nabadgaliyaan Soomaalida Ku jirta Dowladda Kenya.
“Gaaris,Mandheera,Wajeer iyo Islii noo badbaaday wadankaan meel fiican ayaan ka joognaa”ayuu yiri Aadan Barre Ducaalle.
wuxuu sheegay inay diyaar uyihiin wada hadal inay la galaan shabaabul mujaahidiin oo meel kasta ay ugu tagi doonaan.
Wuxuu ugu baaqay shabaabku inay banaanka ka mareen oo ay joojiyaan dagaalada iyo dilalka ay ka wadaan Kenya.
HOOS KA DHAGEYSO
DHAGEYSO:-Wasiirka Warfaafinta Maareeye ”Dowladdu wax taageero ah kama heysato Shacabka Soomaaliyeed”
Posted on March 7, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Wasiirka Warfaafinta ee dowladda Maxamad Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay ineysan dowladdu wax taageero ah kama heystaan shacabka Soomaaliyeed.
Wuxuu sheegay iney shacabku aad u mucaaradsan yihiin dowladda heer ay gaareen buu yiri’ ineysan canshuur inoo ogoleyn.
Inkastoo ay dowladdu ganacsatada xoog uga qaado lacagaha canshuurta ayaa haddana waxaa jira iney eedo badan kala kulanto ganacsatada.
Waxaa madaxda dowladda la weydiiyaa hadeysan ammaankeena sugi karin oo ciidamadiinu na dhacayaan sidee baan canshuur idiinku siinaa.?
Cabashada dowladda ee ah ineysan wax taageero ah ka heysan shacabka Soomaaliyeed ayaa waxaa loo aaneeyaa iyadoo la shaqeysa shisheeye taasoo keentay in shacabka oo ilaashanaya caqiidadooda ay xiriirka u jaraan dowladda.
DHAGEYSO:-Sh Maxamed Cabdi Umal Shalay iyo Maanta (Dowladii Cabdullaahi Yuusuf Vs Dowlada Xasan Sheekh
Posted on March 4, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Sheekh Maxamad Cabdi Umal oo kamid ah wadaadihii caanka ku ahaa taageerida Jihaadka, balse sannadihii dambe isku rogay bilcagsi kana soo horjeestay in lala jihaado shisheeyaha kusoo duulay Soomaaliya ayaa waxaa meel walboo uu tago xujo ku noqotay su’aal ah: “Sheekhow shalay waxaad sheegtay iney riddo tahay dowladdii C/llhi Yuusuf sidoo kalana ay sharci tahay in lala jihaado iyada iyo gaalada, maantana waxaad leedahay riddo ma ahan dowlad iyo maamulo taas kasii daran, jihaadkiina waad kasoo hor jeesatay ee sidee wax kaa yihiin”.
Su’aal tan lamid ah ayaa Sheekh Umal lagu weydiiyay dalka Zaambiya oo uu dhowr maalmood kahor kasoo laabtay, laakin Sheekha ayaa si ayba su’aashan uga harto hadda kadib ka ku dhaqaaqay inuuba iska inkiro inuu raddiyay dowladdii Kenya lagu soo dhisay ee amxaaro kalkaalka ahayd.
Qofkii su’aasha weydiiyay ayuu Sheekhu ku xujeeyay inuu keeno codkiisa ama cadeymo xaqiijinaya inuu radiyay dowladdii C/llhi Yuusuf. Idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan ayaa soo bandhigtay mid kamid ah hadaladii tirada badnaa ee uu Sheekhu ku raddiyay dowladdii C/llhi Yuusuf.
Wuxuu sheegayaa in dowladdaasi ay tahay dowladda iyada la wato oo ay amxaaradu kusoo dhistay Nayroobi, waxa uu ku sifeynayaa dowladda aanan madax bannaaneyn isagoo tusaale usoo qaadanaya sida ay Xabashidu jagada uga qaadi jirtay hadba ninkii ay doonto gaar ahaan marka madaxdu is khilaafto.
Sheekha ayaa hadalkan ku inkiraya wadaado taageerayay C/llhi Yuusuf isagoo si cad u sheegaya in dowladdaasi ay ku dhacday (muwaalaatul-kufaar) wuxuu soo bandhigaya aayadaha loo daliishado iyo ijmaac ay soo guuriyeen culimada.
Qodobkan ayaa waxaa qeyb ka ah Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo ka hadlaya waxa u sababta ah isbadalkan sibiqda ku galay Sheekh Maxamad Cabdu Umal.
Goormaan Amxaaro Walaalownay inteense ku Walaalownay ?
Waxaa waayadan soobaxay Siyaasiyiin Soomaali ah, kuwaas oo meel walba la taagan walaalaheena Itoobiya iyo erayo ka sii xun waxaasi. Siyaasiyiintan, ayaa badan kooda ah dad waaweyn oo si fiican ula socda taariikhda u dhaxeysa labada Umadood ama labada dal, Waxa ayna sheegaan in uu dhamaaday Khilaafkii u dhaxeeyey labada dal. Hadaba su’aasha meesha taalaa waxaa weeye goormaan Amxaaro walaalownay inteense ku walaalownay ?
Waxa ay dadka Soomaaliyeed iyo Caalamkuba og yihiin colaadda ka dhaxeeysay dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ama haddan si kale u dhigo Umadda Soomaalida iyo Xabashida ku nool Geeska Afrika. Kuwaas oo ay Colaaddoodu soo bilaabatay Qarniyo ka hor ilaa maanta ay taaagan tahay. Bal inta aanan u gelin goorta la walaaloowbay iyo meesha lagu walaaloobay aan marka hore dulmaro taariikhda labada Umaddood.
Sida aanu og nahay Anaga iyo Amxaaro waxaa na dhextaalo colaad gaamurtay, taas oo salka ku hayso arimo badan oo ay ka mid yihiin isbalaarin iyo isa sheegasho ka imaaneysa dhanka Xabashida ilaa maantana socota, Waxa ayna isbalaarintaasi ugu danbeyntii keentay in labada Umadood ay isaga horyimaadaan dagaalo badan. kuwaas oo aan ka xusi karno dagaaladii dhexmaray Axmed Gurey iyo Xabashaddii waagiisii nooleyd. Waxaa sidoo kale ka mid ah dagaalada dhexmaray labada Umadood dagaalkii Barakaysnaa ee 77, Kaas oo ay hormuudka u ahayd Dowladdii uu Madaxweynaha ka ahaa Allaha u naxariistee Maxamed Siyaad Barrre ee lagaga gol lahaa xureynta dhulka Soomaali Galbeed.
Dadaalo dheer ka dib oo ay Xabashidu ku dooneysay in ay ku qabsato dhulka Soomaalida ama ay ku dooneysay in ay ku badasho diintooda, Ugu danbeyn, waxaa u suurtagashay Xabashidu in ay hanato dhul Soomaaliyeed oo aad u ballaaran. Kaas oo uu ku wareejiyey Ingiriistii gumeysanayey Waqooyiga dalka. waana dhulka maanta loo yaqaano Soomaali Galbeed ee ay Xabashidu xoogga ku haysato.
Ka dib markii ay Umadda Soomaalidu iska xureysay Gumeystihii qaashimka ahaa ee reer Yurub, Islamarkaana la dhisay Qaran Soomaaliyeed oo xooggan. Ayaa waxaa laga dalbaday Taliskii Xabashida ee waagaasi jiray sida kii Xayle Salaase iyo Mingiste in ay soo wareejiyaan dhulkii gardartada lagu siiyeyey balse nasiibdaro Amxaaro dheg jelaq umaysan siinin dalabkaasi, taasi oo markii danbe keentay in ay labada Umadood dagaalo isaga horyimaadaan sida dagaalkii 1977 oo kale. Dagaalkaasi oo runtii ahaa mid cadowga lagu xanuujiyey, islamarkaana loogu dhigay casharo aysan ilaawi doonin waligood.
Dagaalo ay dhiig badani ku daateen ka dib, Waxaa u suuragashay ciidamadii Soomaalida in ay qabasadaan dhamaan dhulkii ay Xabashidu xoogga ku haystay,taas oo tuntii ahayd guul taariikhi oo ay soo hoyeen Ciidamadii Soomaalida inkastoo markii danbe dib looga soo baxay dhulkaasi, ka dib markii ay dagaalka soo farageliyeen dowlado ay ka mid ahaayeen Ruush,Kuuba iyo kuwa kaleba.
Umadda Soomaalida, ayaa dagaalkaasi u gashay sidii ay u soo ceshan lahad dhulkii laga haystay ilaa maantana laga haysto. Waxaana dagaaladaasi ku shahiiday Kumanaan wiil oo Soomaaliyeed halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale. Dagaalkaasi ka dib, Waxa ay Xabashidu go’aansatay, Iyadoo kaashaneysa dalal ay jaal yihiin in la burburiyo dowladnimada Soomaalida, si aysan mar danbe u dhicin in uu duulaan danbe kaga yimaado dhanka Jamhuuriyadda Soomaalida.taas oo ay ugu danbeyntii ku guulaysatay ka dib markii ay isticmaashay Jabhado Soomaali ah, kuwaas oo jilbaha u dhigay Qarankii xoogga badnaa.
Intaasi kuma aysan ekaanin ee waxa ay marar badan gudaha u soo gashay dalka ilaa ay markii danbe soo gaartay Magaalada Muqdisho oo ahayd halkii laga soo abuubulay dagaalkii barakaysnaa ee 77. gaar ahaan, waxa ay ciidamooda saldhigyo ka dhigteen Xaruntii Wasaaradda Gaashaandhigga iyo waliba Madaxtooyadii dalka, Iyagoo qoslayo inkastoo markii danbi ay carar wax ka dayeen ka dib markii ay cashar u dhigeen wiilal uu ilaahay barakeeyey.
Inkastoo ay waagaasi carartay, hadana waxa ay geeysatay dhibaato baaxad leh. tusaale ahaan, waxa ay Magaalada muqdisho ku dishay kumaan kun oo Soomaali ah, Iyadoona dhinaca kale burburisay hanti badan, taas oo ay ka marqaati kaceen Hay’adaha Xuquuqul Insaanka ah. Marka la iskudaro dhibaatada ay Xabashidu ka geysatay dhulka Soomaali Galbeed iyo dhulka Jamhuuriyada, waxaa la oran karaa waxaa dhacay xasuuq ba’an. tusaale ahaan, hal magaalo oo ku taallo gobolka Gedo, waxa ay ku dishay maalin qura 70 iyo dhowr qof, halka afartan kalena ku dishay banaanka Magaalada.
Laga bilaabo maalintii Xabasho dhulkaasi la siiyey ilaa maanta ma jirto meel ay Labada Umadood uga heshiiyeen sida laga yeelayo dulka iyo dadka maqan, haddii Iyada la siinayo iyo haddii ay soo celineyso intuba. Hadaba su’aasha meesha taalaa waxaa weeye kuwan ku hayo walaalaheena Itoobiya xagey warkaan ka keeneen, xageese lagu walaalowbay ? Mase noo sheegi karaa isbadalka dhacay ee keenay in la walaaloobo ?
Dadka Soomaaliyeed, ilaa maanta ma oga meel Amxaaro lagula walaaloobay iyo waliba meel lagula heshiiyey intuba. Bal waxa ayna og yihiin oo kaliya in ay Xabashi wali haysato dhulkoodii (S/Galbeed), islamarkaana ay Iyadu si dadban u maamusho qeybo badan oo ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda haday ahaan lahayd kuwan isku sheega Maamul Gobleedyada sida Soomaaliland,Puntland,Koofor Galbeed,Jubooyinka iyo waliba kooxda Suufiyadda oo ah runtii gacan ka mid ah gacmaha ay Itoobiya ku fowdeyso dalka. Allow ha igu darin adigaa raxmaane kuwa darka Nabiga (SCW) laga celin doono.
Sow ma’ahan marka hore inta aan la walaaloobin in laga heshiiyo wixii dhacay, lana isu celiyo wixii la kala haystay ? Jawaabtu waa haa haddii kale ma jireyso wax walaaltimimo dhab ah. calaakilixaal, waxaan ka rabtaa kuwan iimaan laawayaasha ah ee ku waashay walaalaheena Itoobiya iyo bog cusub baan fureynaa in ay noo keenaan wixii isbadalay goorta ay isbadleen iyo meesha ay iskubadleen, haddii kale waxaan leenahay iska aamusa aamuska ayaa idiin wanaagsane.
Soomaali dhibaatada maanta haysta inteeda badan waxa ay uga imaaneysaa waa faragelinta Xabashida. Tusaale ahaan, Al-shabab ma jirin ka hor duulaankii ay Xabashidu ku soo qaaday dalka 2007. Tusaale kale, kuwa maanta hortaagan Dowladdan Federaalka ee ay ka shaqeyn la’dahay waa taageerayaasha Xabashida haday ahaan lahaayeen Maamul Goboleedyada iyo haday ahaan lahaayeen kuwan Suufiyada ahba.
Waa wax laga xumaado runtii in qof Soomaali ah oo og dhibaatada ay Amxaaro u geysatay Umadda Soomaaliyeed, in uu Umadda la soo hor istaago maalin kasta walaalaheena Itoobiya iyo bog cusub baa noo furmay, Iyadoo ay dalka ka socdaan dhibaatooyinka ay Xabashidu masuulka ka tahay. Wali ma arag kuwan ka hor nin cadowgiisa ku tilmaamayo walaal.
Midda kale, yaa wali arkay siyaasiyiinta Xabashida oo ku hadaaqayo walaalaheena Soomaaliyeed iyo waan ka heshiinay wixii dhacay ? Kolay Anigu ma arag mana maqal, Waxaanse hubaa in ay Xabashi ku howlan tahay burburinta waxa haray ka dibna ay si toos ah u shaacin doonto damaceeda ku aadan dhulkan. Yaa dabada ka riixayo nidaamkan federaalka ah ? yaase hurinayo colaadan ka aloosan gobolada qaar ? Yaad u malayneysaan in uu u been sheegayo Soomaaliland ? Yaa mar walba Adis Ababa uga yeero atoorayaasha Maamul Goboleedyada ? dhamaan Jawaabaha su’aalahani waxaa soo wada waqtiga ee yaan la dhararin.
Anigu dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, Waxa aan waday xog uruurin ku aadan dareen dadka iyo sida ay u arkaan qatarta ka soo socota joogista ay ciidamada Xabashidu joogaan gudaha dalka iyo saameynta ay arintaasi ku leedahay mustaqbalka. Waxaana runtii ii soo baxay in ay dadku muujinayaan walaac badan oo ku aadan mustaqbalka, gaar ahaan khilaafaadkan joogtada iyo fargelinta ka imaaneysa Xabashida. Tusaale ahaan, Waxa ay dadku ka walaacsan yihiin sida ay Xabashidu gacanta ugu dhigayso dhamaan shaqsiyaadka horbooda Maamulada ka jira dalka min heer Dowlad Dhexe ilaa heer degmo.
Gaba gabadii, Waxaan leeyahay Anagu ma ogin hadaanahay Shacabka Soomaaliyeed meel Amxaaro lagula walaaloobay iyo goor lala walaaloobay intuba, ee haddii ay jiraan rag og haday rabaan ha noqdaana Islaaxii wadaadnimada sheegan jiray ee ha noo keenaan cadeyn muujineysa meeshii lagu heshiiyey ee lagu walaaloobay haddii kale Umadda ha laga daayo jahawariirinta iyo u garba duubka cadowga.
Ugu daneyn, Waxaan ugu bishaareynayaa Umadda Soomaaliyeed meel kastaaba ha joogtee in ay soo socoto Shabakada Wadani ah oo u istaagi doonto haddii uu Rabbi idmo danaha Umadda Soomaaliyeed, islamarkaana ka qeyb qaadan doonto joojinta dhiiggan daadanayo iyo raadinta hanaan dib-uheshiisin oo miradhala. Fadlan igala qeybqaado joojinta dhiiggaan daadanayo iyo raadinta xal waara.
W/Q: Abdullahi Ibrahim
Wasiirka Arrimaha Gudaha C/raxmaanOdawaa “Al Shabaab Dagaal ugama adkaan karno waana Koox Warfaafin Xooggan leh”
Posted on February 26, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Xukuumadda uu madaxda ka yahay Xasan Gurguurte ayaa ku dhawaaqday in melleteri ahaan aysan uga adkaan Karin xarakada Shabaabul Mujaahidiin ee shisheeyaha soo duulayaasha Afrikaanta ah kula halgameysa Soomaaliya.
C/raxmaan Max’med Xuseen Odawaa wasiirka arrimaha gudaha ayaa wareysi uu siiyay Telefeshinka Afka Carabiga ku hadla ee Al Jazeera wuxuu ku sheegay in awoodda xarakada Al Shabaab aan ladhayalsan Karin isagoona walaac ka muujiyay xaaladda ammaan ee Muqdisho.
Odawaa ayaa soo hadal qaaday warbaahinta xooggan badan ee xarakada Shabaabul Mujaahidiin uga qeyb qaadanayso dagaalkeeda jihaadka ee ka dhanka ah gumeystaha dalka kusoo duulay.
“Al Shabaab waxay si aad ah muhiimad usiisay warbaahinta waana wax ay kooxaha kale ee xagjirayaasha ah kaga duwantahay runtii Al Shabaab warbaahinta way ku firfircoontahay”ayuu yiri Odawaa.
Wasiirkaarrimahagudahaayaacaalamkaugubaaqay inaysanyaraysanhanjabaadahakasooyeeraya AlShabaab ee kuaaddan in ayweeraro kageysanayaandibaddaiyowadamadaciidankoodukusooduuleenSoomaaliya.“Runtii ma ahan in aan yareysano Al Shabaab waxay gaysan karaan weeraro sidii dhawaan ka dhacday Hoteelka Central Muqdisho” Odawaa.Mar wax laga weydiiyay sida ay uga adkaan karaan xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayuu quus ka muujiyay in Al Shabaab awood melleteri lagu muquunin karo wuxuuna doorbiday in dhanka fikirka lagula dagaalamo sida tashwiishinta jihaadka iyo adeegsiga dacaayado rakhiis ah.
“Xarakada Al Shabaab awood melleteri laguma muquunin karo waa in dhanka fikirka lagu wajaho oo afraadooda iyo saraakiishooda wadahadal lala furo siyaasadana lagusoo daro”ayuu hadalkiisa sii raaciyay C/raxmaan odawaa.
Caddeymahan uu bixiyay wasiirka arrimaha gudaha DF-ka ayaa kusoo aadaysa xilli isku dhax yaacsanaan laga dareemayo xukuumadda Cumar Cabdi Rashiid islamarkaana mujaahidiinta Soomaaliya sii xoojiyeen halganka lagu dhiig bixinayo shisheeyaha soo duulay.
DHAGEYSO:-Maxay Itoobiya naga rabtaa?
Posted on February 22, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Aqoonyahan Cabdulqaadir Cali Yarow oo ka mid ah Soomaalida qurbaha ku nool ayaa tilaamay in Itoobiya cadaw ku tahay umadda Soomaaliyeed ee Muslimiinta ah loona baahan yahay in la iska celiyo.
Wuxuu sheegay in ay doonayso marka la gaaro 2016 in ay tiraahdo Soomaaliya waa qaran fashilmay ee anig aiyo kenya ha naloo qeybiyo arinkaasna aanuu Soomaalida u cuntami karin.
Wuxuu hoosta ka xariiqay in loo baahnyahay in la abaabulo kacdoon cusub oo cadawga ka dhan ah gaar ahaanna Itoobiya.
Cabdulqaadir wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay umadda Soomaaliyeed in la mideeyo laguna xukumo shareecada Islaamka.
XIGASHO RADIO ALFURQAAN.
DHAGEYSO- SHALAY IYO MAANTA:Gabi dhacleynta Sheekh Umal iyo Mawaaqiftiisa Diineed
Posted on February 19, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Warbixin xasaasi ah oo laga diyaariyay isbed-bedelka dhanka mawaaqifta diineed ee Sheekh Max’med Umal oo kamid ah soomaalida dalka dibaddiisa ku nool.
Warbixinta ayaa lagusoo qaadanayaa Sheekh Umal oo hadallo is burinaya ku hadlaya islamarkaana waji gabax kala kulmay jaaliyadda soomaalida wadanka Zaambiya gaar ahaan magaalada Ndola.
Su’aalo Max’med Cabdi Umal la weydiiyay waxaa kamid ahaa qof muslim ah maka mid noqon karaa Ciidanka Mareykanka?,malagu gaaloobayaa la shaqeynta Dowladda Federaalka iyo waxa ay shareecada islaamku ka qabto dasaatiirta gacan ku sameyska ah ee reer galbeedku soo dajiyeen oo xukuumadda Xasan Sheekh ku dhaqanto.
Sh/Umal ayaa waxaa ugu dambeyntii ku buuqay dadkii uu muxaadarada u qabanayay kadib markii ay dhageysan kari waayeen jawaabaha khaldan ee uu ka bixiyay su’aalaha la weydiiyay.
Marka wadaad uu ku dhawaaqo wax yaabo laga shakisan yahay amaba caamada u muuqan kara ayaa waxaa lala xiriiraa oo arrinta loo bandhigaa culimada aqoonta leh ee rabaaniyiinta ah si ay u bixiyaan jawaab sharci ah, laakin arrimaha uu ku kacay Sh/Umal uma bandhigin mashaa’ikh kale ee waxaan u bandhignay Sh/Umalkii hore ee dadka u qarin jiray Al-walaa’ Walbaraa’.
Maalinta Xasuuqa Ogadenia (Ogaden Massacre Day)
Posted on February 18, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Waa Maalin kuweeyn Umada Somalida Ogadenia Bishan Febaraayo oo ah Bil kulmisay wax yaba badan haba ugu badnadeen Xasuuqa Shacabka Somalida Ogadenia ay u gaysteen una Gaysanayaan Ciidamada Gumaysiga Ethiopia dadka Shacabka ee somalida Ogadenia lagu gumaadayo Dhulkoodii hooyo. Hadaba Ururka Dhalinyarada & Ardayda Somalida Ogadenia (OYSU) oo ah Urur u tagaan Gudbinta Xaquuda Shacabka Somalida Ogadenia laga galo Ayaa waxay soo diyaariyeen Qoraalkan, Qoraalkan ayaa wuxuu yahay Qoraal ku xusan dadkii Lagu xasuuqay bishan Febaraayo Gudaha Ogadenia iyo Tacadiyadii loo gaystay dadka Birimagaydada ah,Hadaba ma wada hali karno dhamaan dadka bishan gudaha Ogadenia loogu xasuuqay iyo tacadiyadaha kala gadisan ee bishan ka dhacay Gudaha Ogadenia haba ugu danbeeyaan kuwii ka dhacay isla bishan Febaraayo 8 – 02 – 2015 Gobalka Shabeele, Magaalooyinka kala ah,Beercaano,Ceelweyne,Hadhaawe iyo Dagmada Dhanaan. Qoraal Laguma Soo koobi karo Laakiinse inta Alla naga Garansiiyay Taariikhduna Qortay ayaa waxaan jacelnahay in aan la wadaagno dhamaan Umada Muslimiinta ah Gaar ahaan Umada Somaliyeed 20 kii sane ee ugu danbaysay Xasuuqa ay ugaysatay Ethiopia dadka Shacabka ah ee ku nool Gudaha Ogadenia, Hadaba Qoraalkii oo kooban waa sidan -:
06 Febraayo 1994 Waa Maalintii ay Ciidamada Gumaysiga Itoobiya bilaabeen Xasuuqa iyo Isir goynta shacabka Somalida Ogaden waana maalintii magaalada Wardheer ay ku dileen gudoomiye ku xigeenkii magaalada Wardheer Marxuum Cabdulaahi Ibraahim Yuusuf (Abdullahi Ganay). Marxuum Cabdullahi Ganey wuxuu horistaagay qorshayaal ay Itoobiya ku doonaysay inay ku khayaamayso shacbiga. Mid ka mid ah qorshayaashaas wuxuu ahaa shir ay dawladdu doonaysay inay isugu yeedho Odayaasha iyo cuqaasha dadwaynaha laguna qasbo inay taageraan mawqifka dawladda oo ahaa in shacbigu ku sii hoos jiro dawladda Itoobiya.
10 Febraayo 1994 waxay Ciidamada Gumaysiga Itoobiya si waxashnimo ah ugu dileen Magaalada Qalaafe Marxuum Duulane Xasan Gaabane oo ahaa Gudoomiyihii Dagmada Qalaafe iyo Laba ruux oo shacab ah lana kala odhan jiray Cabdi Cali Aadan iyo Diiriye Dhaqane.
12 Febraayo 1994 Waxay Ciidamada Itoobiya si waxshinimo ah magaalada Qabridaharre ugu dileen guddoomiyihii iyo k/xigeenkii, Marxuum Maxamed Cumar Tube iyo Marxuum Deeq Maxamud Carab. Waxaa dilka labada mas’uul ka sii fool xumaa silcintii maydkooda oo ay ciidamadu ehelkii iyo dadwaynihii kalaba u diideen inay xabaalaan, arrintan waxay noqotay wax ku cusub taariikhda kana soo horjeedda xeerarka caalamiga ah iyo garashada caqliga fayow.
12 Febraayo 1994 Waxay Ciidamada Itoobiya Magaalada Dhagaxbuur ku dileen Marxuum Mahad Muuse Ibrahim iyo Marxuum Deeq Yuusuf Kaariye oo Deeq ahaa qoraagii Joornaalkii la odhan jiray Sheeko & Shaahid.
Sidoo kale waxaa dad lagu xasuuqay magaalooyinka kala ah Qabridahare, Qoriile, iyo Gunagado. Iyadoo Qabridahare lagu xasuuqay30 dhalinyaro ah 2005 kii, Qoriile lagu xasuuqay 20 rayid ah 2008, Gunagado lagu xasuuqay 30 shacab ah 2010. Dhamaan dadkaasi shacab ayay ahaayeen.
15 Febraayo 1994 Waxaa la qabtay kalfadhigii baarlamaanka dalka Ogaadeenya, Baarlamaanku waxay ka doodeen mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Ogaadeenya waxayna aqlabiyad badan ku go’aamiyeen in dadwaynaha Soomalida Ogaadeenya laga qaado afti lagu waydiinayo waxa ay aayahooda ka damacsan yihiin.
17 Febraayo 1994 Waxay Odoyaasha iyo Ugaasyaduba u gudbiyeen Meles Zenawi isagoo kula shiraya Goday in Afti laga qaado dadkooda.
Go’aanka Baarlamaanku wuxuu lahaa muhimad iyo tixgalin gooni ah maadaamada uu baarlamaanku ahaa kii ugu horreeyey taariikhda Ogaadeenya ee shacbigu si dimoqraadi ah u soo doortaan kalsoonina ka haystay dadwaynaha, sidoo kale go’aanku wuxuu waafaqsanaa dastuurkii ku meel gaadhka ahaa ee Itoobiya oo sheegayey in ummad walba ay dooran karto aayahooda marka ay dhamaato waqtiga ku meel gaadhka ah ee dawladdii Itoobiya. Maalintii go’aankan la qaatay waxaa loo aqoonsaday inay noqoto “Maalinta aayo-ka-talinta” ee dalka Ogaadeenya.
17 Febraayo 1994 Waxay Cuqaasha Ogaadeenya Zenawi hortiisa ka taageereen go’aankii Barlamanbka isagoo shir Albaabada loo xidhay kula jira magaalada Harar, isla Badhtamihii Febraayo 1994 Ururkii ONLF Golihiisii dhexe ayaa go’aan aqlabiyad buuxda ah ku taageeray go’aankii Baarlamaanka kuna baaqay in si nabadgalyo ah oo waafaqsan dastuurkii ku meel gaadhka ahaa ee Itoobiya lagu dhameeyo dhibaatada u dhaxaysa Ogaadeenya iyo Itoobiya
22 Febraayo 1994 Waxaa magaalada Wardheer laga qabanqaabiyey bannaanbax lagu taageerayo go’aankii baarlamaanka iyo kii ka dambeeyey ee JWXO ee lagu codasaday in dadwaynaha afti la waydiiyo sidoo kale waxaa xilligaas ku sugnaa magaalada Wardheer Guddoomiyihii JWXO Allah ha u naxariistee Marxuum SheikhIbraahim Abdalla oo isna hadal ka jeedin lahaa bannaanbaxa.
23 February Waxay ciidamada Itoobiya gurigiisa kala bexeen magaalada Dhagaxbuur Mukhtaar Gadhweyne isaga oo ay ku hortogteen xaaskiisa Xaliimo Haybe Mohamuud, isla habeenkaas waxay dileen Dhuux Siyaad, Sidoo kale waxay isla xiligaas dileen nin magiciisa naloogu sheegay Taagwaa, waxay sidoo kale si waxash nimo ah ugu dileen isla magaalada Dhagaxbuur Ina Ahmed Nuur oo ahaa Macalin bare Dugsiga Hoose Dhagaxbuur. Sidoo kale Gudoomiyhii gobalka Dhagaxbuur Bulbul oo ilaa hadda aan lahaynin geeri & nolo.
24 February: Xasuuqii Magalada Wardheer Lagu Xasuuqay Dad kor u dhafayo 85 Ruux kuwaas oo dhamaantoodba ahaa Shacab Birimagayda ah. Xasuuqan ayaa wuxuu dhacay kadib markii Ciidamada Ethiopia Amar lagu siiyay inay Joojiyaan Banaanbax ay dhigayeen dad shacab ah.
Ciidamada Itoobiya waxaa amar lagu siiyey inay joojiyaan bannaanbaxa isla markaana soo qabtaan Madaxwaynaha JWXO geeri ama nololba, Ciidamada Itoobiya oo ku hubaysan hub culus ayaa soo weeraray wafdigii JWXO oo uu ku jiro Guddoomiyihii waxayna shacbigii reer Wardheer maalintaas si geesinimo iyo wadaninimo ah u difaaceen magacii umadda iyaga oo qab jabiyey ciidamadii xoogga badnaa ee Itoobiya kana horistaagay inay gacanta ku dhigaan Madaxwaynihii JWXO iyo inay joojiyaan bannaanbixii. Ciidmaada Itoobiya oo adeegsanaya hubka cul-culus ayaa waxay xasuuq u gaysteen dadwaynihii iyagoo si aan aabo-yeel lahayn u gumaaday shacbigii magaalada Wardheer waxaa maalintaas goobtaas ku geeriyooday 85 ruux oo u badan dad rayid ah.
Dhacdooyinkaas waxay leeyihiin Xusuus Farxadeed iyo Murugo labadaba waxay huwan yihiin murugo marka laga eego xasuuqii loo gaystay dadwaynaha reer Wardheer iyo waliba burburkii dhismayaashii Magaaladda iyo madaxdii lagu laayey Qabridaharre, Qalaafe iyo Dhagaxbuur iyo Dhamaan Gudaha Ogadenia, dhinaca kalana waxay mudan yihiin xusuus huwan farxad iyo faan marka laga eego sida dadwaynuhu ugu istaageen xaqooda una qab jabiyeen ciidamdii xoogga badnaa ee Itoobiya iyagoo difaacay madaxdii iyo magacii umadda.
Waxayna noqotay arrin lagu faani karo taariikhdana gashay sidii dadwaynaha reer Wardheer oo aan haysan hub u dhigma kii ay wateen Ciidamada Itoobiya iyo sida ay u difaaceen Magaaladda iyo madaxdii shacbiga, inkastoo dad rayid ah oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen, waxay mudan tahay maalintaasi xusuus gaara.
8-9 February 2015: Gobalka Shabeele Gaar ahaan Magaalooyinka kala ah- Beercaano,Ceelweyne,Hadhaawaxaa lagu Xasuuqay dad shacab ah oo aan wax galabsan,Dhamaan dadka Magaalooyin kaas lagu xasuuqay ayaa Maydkooda waxaa la isugu Keenay Garoonka Magalada Godey, iyadoo dadkii magaalada Murugo iyo ciil ay ku reebtay arinkaasi.
Xasuuqa caynkan oo kale ah ayaa dhaqan u ah Gumaysiga Itoobiya waana caadadooda inay intay dad shacab ah oon waxba galabsan laayaan kadibna in la Aaso u diidaan.
Isku soo wada duuboo Bishan February Taariikhadaas ayeey kulmisay Waxayna Shacabka Somalida Ogadenia xusaan Bishan iyadoo ah bil Murugo Waxayna utagantahay Xadgudub iyo Xasuuq loo gaystay dhamaan Bulshada noocayadeeda kala duwaan haba ugu badnaadaan Dadka Birimagaydada ah.
Dhinaca kalana waxay u tahay Halgan xaq udirir ah Maadama dadweynaha Somalida Ogadenia utagan yihiin in ay Gumaysiga madow iska qadaan dhib walbana u adkaystaan.
OYSU World Wide.
DHAGEYSO:-Cabdi Waal “Xasan Sheekh iyo Maleeshiyaad Calooshood U shaqeystayaal ah ayaa kusoo duulay Shacabka Guriceel”
Posted on February 17, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Siyaasiga Cabdi Nuur Siyaad oo mid ahaa dagaal oogayaashii Soomaaliya ayaa ka hadlay colaadda ka aloosan magaalada Guriceel ee gobolka Galguduud.
Cabdi Waal oo warbaahinta islaamiga ah lahadlay ayaa sheegay in Xasan Gurguurte uu mas’uul ka yahay wax uu ugu yeeray gummaadka dadweynaha Guriceel.
Dagaalladii maalmo ka hor ka dhacay Guriceel ayuu ku sifeeyay kuwa dadka deegaanku ay isaga difaacayeen maleeshiyaad kusoo duulay isagoo DF-ka eedeeyay in ay dalka ka iibisay shisheeye.
Ciidamadda Siiraaliyoon ee Soomaaliya ka Cararay oo Shaaciyay in Al Shabab ay La Socdaan Xogta Dagaalka ee Amisom
Posted on February 16, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Kornel Abubakarr Conteh iyo Kornel Talieu Michael Brima, oo ka mid ahaa ciidankii ku soo duulay Soomaaliya ee dowladda Sierra Leone ayaa wareysi siiyay warbaahinta gudaha dalkaas, kadib markii ay ka carareen howgalka loo keenay Soomaaliya oo ah mid fari ka qodnayn waxayna ka hadleen xalada dalka Soomaaliya iyo dagalka ay kula jireen Xarakada Al Shabab.
Saraakisha ayaa mar wax laga weydiiyay dagalada Soomaaliya waxaa ay ku jawaabeen ” Soomaaliya dadka ku nool waa sida dad xan badan,” oo ay ula jeedaan waa dad war heli og oo kala war haya.waxaa kale ku sheegay warbixinada la xiriira dagaalka, si dhaqsa leh ayuu u faafayaa, Xarakada Al Shababna ee aan dagaalka aan kula jirno waxaa ay si buuxda ugu warqabta Xogta Amisom, .
Sidoo kale waxaa uu sheegay in ciidamada siraaliyoon in safar dhanka dhulka ku yimaadeen dalka Soomaaliya iyagoo kasoo tagay wadanka kenya, iyagoo ay jiraan weeraro la yaab ale oo habeen iyo maalin kala hor imaayaeen Al Shabab,wuxuuna sheegay inow ku adkaaday dagaalka dhowlka howdka ah.
Waxa uu ku tilmaamay Xarakada A Al-Shabab sida hay’ad habaysan xeelado milatari oo kala duwan leh iyo tababaro.
DHAGEYSO:-“ Waxaan ku Sigtay in Al-Shabaab Nolosha igu Qabtaan”
Gudoomiyaha gobolka Sh/hoose ee DF Cabdulqaadir Maxamad (Siidii) ayaa sheegay in uu ku sigtay in ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab nolosha ku qabtaan marar badan laakin uu ka badbaaday.
Wuxuu sheegay in isku daygii ugu dambeeyay uu ka dhacay hotel uu ka daggan yahay degmada Baraawe ee gobolka Sh/hoose, wuxuuna tilmaamay in dhaawacyo ay kasoo gaareen weeraro badan oo uga yimid dhanka mujaahidiinta.
Sidii ayaa sidoo kale ka hadlay qaabkii loo dilay gudoomiyihii degaanka Marin gubaay ee dhaca inta u dhaxaysa Baraawe iyo Buulo-mareer.
Halkan Ka Dhageyso Cabdulqaadir Siidii
WARBIXIN XASAASI AH: Qorshaha Gabre iyo Geedi ee Hiiraan Iyo Shabeellada Dhexe
Posted on February 15, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Allaah ayey mahad oo idili usugnaatey, nabadgalyo iyo naxariisina Nabigeenna Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo.
Aqristoow waxaa jira qorshe Ex PM Cali Maxamed Geedi iyo Jen.Gabre eey isla wadaan, oo madaxweyne Xassan Sheekh iyo odey-dhaqameedyada “Beesha” Geedi kadhasheyba lagu qancinayo, kaasoo ah in labada gobole Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan inta la mideeyo, maamulna loosameeyo, dibadeedna Geedi “Madaxweyne” looga dhigo, si waliba qasab iyo sandulle ah, oo lamid ah sidii Shariif Sakiinba loo boqrey, ee waliba Itoobiya ugu amartey Dowlada Dhexe in eey isaga ookaliya taageerto, si Kal-iyo-Laab ah ulashaqeeyso, waxa kaloo dhanna qashinka kushubto. Waana sida dhab ahaan u dhacday! Xaalku waa: “Shariif-Sakiin dooran doorta xoowdhahdeen, Digil iyo Miraflana xoow dambaajiseen”
Beelaha walaalaha ah ee dhamaan wadadaga labadaa Gobole: Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, iyana sidaa si lamid ah ayaa larabaa in lawada maquunimo. Waxaan maqlijirey, “Fad ama hafadin, wallee waa lagu fadsiin”.
Waxaa sidoo kale qorshuhu yahay in lawada jajuubo siyaasiyiinta kalee labadaa gobol dhalasho ahaan kasoo jeeda, ee damaca siyaasadeed uu kujiro, si markaa uu Geedi uun ugusoo boxo “Madaxweynenimada”. Waxaa sidoo kale qorshaha ka mid ah in Geedi uu billoowga hore inkiraad lasoo taagnaado, isagoo dhahaya jago Maamul-Goboleed wax kufalimaa, sida horeba uu udhihijirey, balse gadaal ayuu kasoo rogaalcelinayaa. Dabcan nin Ra’isulwasaare dalka kasoo noqdey oo “Maamul-Goboleed” beeshiisu dhisatey hoos ugu dhaadhacayna Cabdiweli Gaas baa ubilaabay, oo kaga horeeyey.
Shirkii qorshaha arintan billoowga uahaa waakan GEEDI uu kasoo dhexmuuqday, isagoo dhinaca kuhaya Ugaaskii beeshiisa, oo waliba kuqanacsan sida wax usocdaan, waloow laga yaabe in aanu qorshaha waxbadan kala socon, cidina aaneey wax sihoose ugu faahfaahin, maadaama qorshe rag wataahi yahay, isagana odey-dhaqameed lasharfey oo kaliya noqonkaro.
Dhinaca kale, Madaxweyne Xassan Sheekh waxaa lagu xantaa in uu aad ugu roonyahay “Reer Abtiyaashii” oo ka mid ah kuwa ugu tunka weyn Gobolka Hiiraan, ayaa ka mid noqondoona beelaha ladamacsanyahay in lawada xaq-duudsiiyo. Madaxweyne Xassan waa kan mar isugu daray Wasiirkii Arimaha gudaha (Goodax) iyo Taliyihii Nabad-Sugidda (Sanbaloolshe), waloow RW Cabdiweli uu arintaa isbadal aan lamahdin kusameeyey.Waa tan khudbadiisii ugu horeeysey ee uu Hiiraan kajeediyey dhibka weyn usoojiidey, ugu dambeynna waa kan hadda wiil walaalkii dhahay oo reer Abtiyaashii ah wasiirkii Amniga kadhigay, sidaa daraadeed uma sahlana in uu arintaa yeelo, balse marka laisku daro in Geedi maanta Madaxtooyada dhexjiifo, oo Xassan Sheekh lataliye uyahay, oo waliba saameyn ku yeeshay qaabka uu Madaxweyne Xassan Sheekh ula dhaqmayo Beelaha qaar, ee sida joogtada ah ninkastoo udhashey shaqada looga eryayo, taasoo lagusiidaray awaamirta Itoobiya iyo Jen.Gabre, howshaa waxbadan baa ka suurtagal noqonkara.
Guud ahaan, Jen.Gabre wuxuu taaganyahay ninka inaga inooshaqeeya, ee diyaarka u ah in uu danahiisa gaarka ah inooga gato danaheena qaranka Itoobiya, Soomaaliya wuxuu doono ayaan kadhigeeynaa, taageerana ugu heleeynaa, si siyaasi kastee Soomaaliyeed oo damacba kagajiro siyaasada Soomaaliya, uu inoogu soo ordo, sidaana uu Kaba-Qaad/Madiidan inoogu noqdo. Tusaalaha ugu dhow ee arintan waa in shalay markii Beelweeynta Digil iyo Mirifle iyagoo mideeysan eey maamul “Lix Gobol” kakooban dhisteen, waliba “Madaxweyne” eey kuwada qanacsanyihiina udoorteen, beey Itoobiya iyo ninka maamulaha uga ah siyaasada Soomaaliya ee lagu magacaabo: Jen.Gabre inta waxoo dhan cagta mariyeen, oo waxba kamajiraan kasoo wadaqaadeen, beey Shariif Sakiin oo naceybkiisa eey ummada Digil iyo Mirifle maalin cad Beeydhaba ugu mudaharaadeen, beey si qasab ah dusha uga saareen oo “Madaxweyne” uga dhigeen, waxoo dhanna “Sadex gobol” kusoo koobeen, oo caasimadana uga dhigeen magaalada dekadda leh ee Baraawe, si dalkaa Itoobiya ee aan Xeebta laheyn (land locked), uu uga faa’ideeysto sidii dekaddaaa Baraawe sidii dekadd eey iyagu leeyihiin oo kale, waxeeyna ugu biireeysaa tani dekaddaha kalee Maamul-Beeleedyada (Somaliland iyo Puntland) ee ay ka faa’ideeystaan hadaba.
Shariif-Sakiin wuxuu arintan kumuteeystey in uu ahaa ninkii saxiixey documents-kii lagu ogolaadey in Itoobiya dalka ay soogasho xilligii Col.C/llaahi Yuusuf iyo Geedi, markasoo eey xasuuqii ba’naa ka geeysteen Gobollada Koofureed, gaar ahaa Gobolka Banaadir. Wuxuu sidoo kale ahaa waligii madiidan ay Itoobiya isku hubtey waligeed, kuna faana in uu yahay nin eey Itoobiya wadato, ama u shaqeeya.Waa arin wadamada xorta ah la isugu xukumo dil, maxaayeelay waa khayaano qaran ama waxa afka qalaad lagu dhoho“Treason”.
Maantana sidaa si lamid ah ayey Geedi ugu abaalmarinayaan Xasuuqii ba’naa ee uu ka geeystey Koonfurta Soomaaliya, waliba kii ugu darnaa ee uu dadkiisa Gobolka Banaadir daga eey isaga, Col.C/llahi Yuusuf, maryacalastoodii, iyo waliba Itoobiyaanka ay ugu wada geeysteen xilligii uu Ra’isulwasaaraha ahaa, iyo waliba sida waligiisba uu ula shaqeeyn jirtey, hadana ulashaqeeyso Itoobiya waliba isagoo Madaxtooyada/Villa Soomaaliya subaxkasta kasoo toosa.
1-Soomaalida ayaa waxeey tiraahdaa, “Quraankii Alif ka hallaaba, Al-Baqro kama tooso”, sidaa daraadeed waa in howsha mideeynta iyo maamul usameeynta gobollada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan aan billowga laga halleyn.
2-Waa in shirarka laqabanayo ee Maamul usameynta Gobolladaa eey noqdaan kuwo loodhanyahay, oo dhamaan beelaha Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee gobolladaa wada daga uwada dhanyihiin.
3-Waa in si cadaalad, wadatashi, istixgalin iyo isxaqdhowr ah waxwalba lagu saleeyaa.
4-Waa in ummadaa dagta labadaa gobol aan shaqsi ku eedeeysan in uu dambiile-dagaal (War Criminal) aan loowada afduubin masiirkooda dhan ee ummadeed, dowladuna sidii maamulkii Shariif-Sakiin dhacdeyba aaneey ugu sharaf beelin, balse eey taageerto maamul xalaal ah oo ummadaa eey kudhanyihiin, kuna wada qanacsanyihiin, si simanna uwada matala. Waloow Jen. Gabre iyo madaxdiisa kasareeysa saameeynta eey dalka kuleeyihiin Dowlada Dhexe ay tahay mid aah xad laheyn “Limitless”.
5-Ugu dambeynna dowladu waa in eey dhextaagnaataa ololaha maamul usameynta labadaa gobol, kaalin firfircoona ka qaadataa, iyadoo ilaalineeysa sawirka guud ee nabad iyo walaaltinimo kuwada noolaashaha dhamaan beelahaa walaalaha ah ee kuwada dhaqan labadaa gobol.
Qoraa: C/Qaadir M. Cismaan (Cabdiboqor)
Maamule kuxigeenkii hore ee Kulliyada Maamulka iyo Dhaqaalaha, isla Kulliyadaana Bare/Macallin ka ahaa
Al-Madinah International University.
Minnesota, USA. (342)
DHAGEYSO:ICTISAAM-Goormee saxanyahay Bashiir Salaad Shalay &Maanta?
Posted on February 12, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Hoggaamiyaha Wadaada Xumayaasha Soomaaliya ayaa ah kuwa jahareer badan hayo ka dib markii ay mudo dheer kala hadlayeen,waxaana ku wareerara mudo Soomaaliyeed.
Voice Of Somalia-Somalia Leaks.
DHAGEYSO:-Siyaasi iyo Oday dhaqan oo Falanqeeyay Hab Dhaqanka Baarlamanka.
Posted on February 1, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Falanqeyntaasi waxaa wadaagay Siyaasiga Xersi Diini Hilowle iyo Nabadoon Cabdikariin Muuse Casir.
Cabdikariin Muuse ayaa sheegay in dalka Soomaliya gaaladu u ogoleen inay ka dhalato dowlad rasmi ah oo madax bannaan.
Wuxuu soo hadal qaaday is marin waaga ka dhaxeeya baarlamanka iyo reysulwasaare Cumar Cabdirashiid.
Xeris Diini Hilowle ayaa sheegay in dowlada aysan dan uhaynin umadda Soomaaliyeed korna ay ka maamulaan Maraykanak iyo reeer galbeedka.
Wuxuu sheegay xildhibaanda iyo wasiirada in dhamaantooda lagu soo xulay diin iyo damiir la’aan
DHAGEYSO:GABAY CIIL AH-Hooyo Ubadkii laga qaatay Cidlana looga tagay.
Posted on January 30, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Gabay calool xumo ah oo Gabadh ninkeedi Xumaan ka Tirsatay ku muujiyey cabasho weyn iyo habaar sugaaneed Intii la arkay kii Ugu weyna abid oo dad badan dareen naxdin leh galiyey.
Waa dhaqan ama caado xun oo Sooomaalido leedayahay in la is dulmiyo,cadaalad daraduna waa shuqul xun oo Soomaalido leedyahay.
DHAGEYSO:-Xagaleey: “Turkiga Hadey Islaam Wax U Qabanayaan Ha U Gurmadeen Qaxootiga Suuriya Ee Xuduudooda Daadsan”
Posted on January 26, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Dowladda Turiga oo Soomaaliya kusoo gashay qaab mucaawino ah ayaa marki dambe is ballaarisay iyadoo la wareegtay dekedda iyo madaarka Muqdisho.
Tukida oo ka tirsan isbahaysiga Nato ee xasuuqa ka geystay dalal uu kamid yahay Afganistaan ayaa Soomaalida qaar ugu sheekeysa iney islaanimo ugu soo gurmatay.
Cabdullaahi Cali Xagaley oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa sheegay in xuduuda Turkiya ay la leedahay Suuriya ay ku dhibaateysan yihiin Qaxootiga Suuriya kuwaasoo uu dilayo barafka iyo qabowga.
Xagaley ayaa Turkida ugu baaqay haddiiba ay islaamnimo wax ku qabanayaan oo aaney Soomaaliya dan ka lahayn, bal ha caawiyeen muslimiinta reer Suuriya ee xuduuda dhooban.
Aqoonyahankan ayaa ka qeyb galay barnaamij kooban oo ka baxay war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan kaasoo looga hadlay imaanshihii madaxweynaha Turkiga ee Muqdisho iyo arimo kale oo la xiriira.
voice Of Saomalia-Somali Leaks.
DHAGEYSO- GABAY:Halgankii Imaam Axmed Gureey iyo Sayid Maxamed
Posted on January 8, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Gabay qiiro badan oo ka hadlaa Halgankii Imaam Axmed Gureey Sayid Moxamed ilaa maantana Halgankaas Xabashida iyo Reer Galbeedka lagula oo ka jiro Dhulka Soomaaliyeed oo idil.
“Godoonkiyo shirkii la isla galay guriga baarliina ,
Afrikada markeey kaala gateen , ee la kala goostay
Geyigaan laheyniyo , dhulkeey gogosho noo tiilay
Gurmadaay dad guul laga sitaa , geed ma jiifsadaa e'”Abwaan Axmed Heelaale.